I-VPN Black Friday 2020 - Iziphesheli Ezikhethekile (Kuqinisekisiwe) - Uhlu
Iziphesheli ze-Black Friday VPN ziyaziwa ukuthi yisikhathi esilindwe kakhulu onyakeni kubasebenzisi be-VPN. Iziphesheli zeBlack Friday VPN zisisindisa ngemali eningi kangangokuthi kufanelekile ukulinda. Uma ufuna amadili we-VPN black Friday, usendaweni efanele.Ama-VPNs abe yisidingo kubasebenzisi abanamasayithi andayo avinjelwa i-ISP yakho noma umnyango we-IT emsebenzini.
Abantu abaningi abasebenzisi i-VPNs ekuphequluleni kuphela kepha nasekuhambiseni, ama-VPNs anamandla okuvula noma yikuphi okuqukethwe kwesayithi lokusakaza. Abathandi abaningi beNetflix abafuni ukuchitha ngokweqile kuma-VPNs, ngakho-ke, balinda ukunikezwa okufana namadili weBlackFriday VPN ababanikeza inani elingcono kakhulu lamarandi.
Ngokuncintisana okwandayo emakethe ye-VPN, sekube yinselele ukukhetha i-VPN ehamba phambili. Ingabe nawe uphakathi kwalabo abadidekile ukuthi iyiphi i-VPN ongayithenga futhi ulinde amadili athile?
Ungakhathazeki, futhi sikubambile. Ngamadili wethu we-TOP 10 Black Friday VPN, uzokwazi ukukhetha kahle i-VPN efanelekile ngokuya ngamadili anikezwa ama-VPN ahlukahlukene emakethe.
Ukwenza kube lula kuwe, sibhale phansi amadili we-TOP 10 Black Friday VPN wakho, izici zawo namanani entengo afakiwe.
Iziphesheli ze-VPN Black Friday (2020)
I-ExpressVPN # 1
Izindawo ezingu-160 +
Uhlelo lwezinyanga eziyi-12
(+ 3 Izinyanga Mahhala)
I-49% Discount + 3 Month Extra
Thola isephulelo esingu-49% Manje
I-NordVPN # 2
Akukho ukuvuza kwedatha
Hlela Iminyaka Emibili Intengo
+ Ukubhaliswa okungeziwe
Ama-68% Ekhishwe + Izinyanga ezi-3 Mahhala
ISurfshark # 3
Thola isephulelo esingu-83% manje
KuhlanzekileVPN # 4
Ukuvulwa Kwendawo Yonke
Hlela Iminyaka Emihlanu Yentengo
Isaphulelo esingu-86% kuHlelo Lweminyaka emi-5
Thola isaphulelo esingu-86% manje
ICyberGhost # 5
Ukuvikelwa kokuvuza kwe-IP
Ukusetshenziswa kwamadivayisi angu-7
Uhlelo Lweminyaka emi-3
I-79% Yesaphulelo Kuhlelo Lweminyaka emi-3
Thola isaphulelo esingu-79% manje
OkuyimfihloVPN # 6
Amaseva 60 Amazwe
Izinyanga eziyi-12 + Izinyanga eziyi-12 ezengeziwe Inani lentengo
Thola isephulelo esingu-81% manje
Ukungena ngemvume okuningi
Ukuphepha kwe-Wi-Fi yomphakathi
Thola isephulelo esingu-77% manje
I-ExpressVPN iyi-VPN ehamba phambili emakethe, enezici ezingavamile, i-ExpressVPN ngokungangabazeki ingenye ye-VPN ekhethwa kakhulu ngabasebenzisi. Ithi ingenye ye-VPN esheshayo emakethe. Eyaziwa kakhulu ekusakazeni kwayo, iyi-VPN ephephe kakhulu ekunika konke okudingayo ngenani elifanele.Ngefayela le- I-ExpressVPN Black Friday isivumelwano, ungonga kuze kufike ku-49% bese uthola izinyanga ezintathu mahhala.
Ngobumfihlo obuhle kakhulu, i-ExpressVPN ikuvumela ukuthi uphequlule ngokungaziwa ku-intanethi. Uthola enye Ukubethela okuhle kakhulu emhlabeni ngale-VPN. Bayakusebenzela ngezindawo zeseva eziyi-160 + ongakhetha kuzo futhi udlulise amehlo ngokushelela. Kwaziwa kakhulu ngokunikela ngokusakazwa kwekhwalithi ephezulu, iNetflix neTorrenting kuzoba bushelelezi nge-ExpressVPN. Ngeke uzwe lutho, futhi kuzofana nokuphequlula okujwayelekile kunoma yimuphi umsebenzisi.
Ngamanani wangempela asukela ku- $ 12.95, isivumelwano esimnyama sangoLwesihlanu siqala ngo- $ 6.67 nje. Isivumelwano esikongela imali engama-49%, uzobe ukhokha u- $ 99.95 kuphela ezinyangeni zokuqala eziyi-15. Lesi yisivumelwano esihlanyayo kunoma ngubani ofuna ukuthenga i-VPN futhi aqale ngokuphepha nobumfihlo obuningi.
Isivumelwano siza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30. Ungahlola iwebhusayithi yabo esemthethweni ngokuchofoza kusixhumanisi sethu ukwazi okwengeziwe ngenqubomgomo yokubuyisa imali.
ISurfshark iyi-VPN egcwele izinto, futhi ungayisebenzisela zonke izidingo zakho zokuphequlula. Isivumelwano seSurfshark Black Friday yisivumelwano sokugcina esizokushaya ingqondo. Inikeza isaphulelo esingu-83% kwisivumelwano sangempela. Ingenye yama-VPNs anikeza ukufinyelela ekusetshenzisweni kwamadivayisi angenamkhawulo ngasikhathi sinye. Iningi labancintisana nabo likhawulela ukusetshenziswa kwamadivayisi ngasikhathi sinye kuya ku-5 noma ku-10.
ISurfshark iza nenkinobho yokubulala enhle kakhulu, noma ngabe uvala uhlelo lokusebenza ngaphandle kokwazi, ukuphequlula kwakho kuzovikelwa kulo lonke. Awudingi ukugcina ithebhu ye-VPN ivulekile ukuze uyifinyelele. Balandela inqubomgomo eqinile yama-log, eqinisekisa ukuthi akukho lutho oludlulisayo ololandelwayo. Banikela ngazo zonke lezi zici ngentengo ephansi kakhulu.
Amadili weSurf shark amnyama ngoLwesihlanu asinika intengo enhle ngama- $ 1,99 nje ngenyanga. Izindleko zangempela ze-VPN ngu- $ 11,95 ngenyanga, futhi lokhu kuyinto enhle kakhulu akekho umuntu ongafuna ukuyilahleka. Wonga cishe u- $ 240 lapho uthenga uhlelo lweminyaka emibili ngeSurfshark. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi lesi sivumelwano sibuyiselwa imali ngokuphelele ezinsukwini ezingama-30 uma ungajabuli nge-VPN.
I-IPvanish ingenye i-VPN ekhulayo emakethe. Inikeza isikhombimsebenzisi esihle kakhulu nobumfihlo kubasebenzisi bayo. Ngesici sayo sokuxoxa bukhoma, ungahlala ukhululekile ukubathumela imiyalezo uma kukhona imibuzo noma izingqinamba. Uma kuqhathaniswa namanye ama-VPN, kuthengiswa ngentengo ephansi kakhulu, ikakhulukazi kubasebenzisi ngabodwana. Uma ufuna ukuxhumeka kwekhaya noma izinjongo zomsebenzi, le VPN inenani elifanele lokufeza izidingo zakho.
I-IPvanish ikunikeza zonke izici ezipholile ngentengo ephansi kakhulu, futhi ungalusebenzisa kahle lolu hlelo lokusebenza. Amanani ale-VPN mahle. Idili elimnyama langoLwesihlanu lakho libiza u- $ 6.49 ngenyanga okungama- $ 77.99 minyaka yonke; kodwa-ke, ngaphandle kwesivumelwano, uhlelo luzobiza u- $ 143.88 minyaka yonke. Wonga kuze kufike ku-46% ngalesi sivumelwano se-Black Friday.
Ungahlola iwebhusayithi yabo esemthethweni ngokuchofoza kusixhumanisi sethu ukwazi okwengeziwe ngenqubomgomo yabo yokubuyisa imali.
Ukusekelwa okuhle kwamakhasimende
Ukubethela kwe-AES okungama-256-bit
Isitoreji esibethelwe se-Sugarsync
Izindawo ezingama-75 +
4. IHotspot Shield
Enye yama-VPN aholayo isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi, isihlangu se-Hotspot, ibe yi-VPN enhle uma kukhulunywa ngobumfihlo nokuphepha. Kuyaziwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi futhi kunesisekelo esiqinile samakhasimende.
Tbayazimaketha kahle kakhulu, futhi bazishaya isifuba ngokuthi bayi- # 1 VPN. Ngokungafani nabancintisana nabo abaningi, banikela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-45 ngaphezulu kwesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30. Uthola ukwesekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu 24/7 nokufinyelela ezindaweni ezingaphezu kwezingu-115. Ungasebenzisa isihlangu se-hotspot kumadivayisi angafika kwangu-5 ngasikhathi sinye.
Amanani entengo yesihlangu seHotspot enziwa kahle, ngesivumelwano esimnyama sangoLwesihlanu, ungathenga isihlangu se-hotspot i-VPN ngo- $ 2.99 nje ngenyanga. Uhlelo lwenyanga lubiza u- $ 12.99, kepha lesi sivumelwano, ungasifuna ngo- $ 2.99 kuphela, sikunikeze ukonga okungama-77%.
Ukubethela kwebanga lezempi
Ukubuyiselwa imali kwezinsuku ezingama-45
Ukufinyelela kudivayisi okungu-5
Izindawo eziyi-115 +
I-NordVPN iyi-VPN ephephe kakhulu ne-ultrafast elandela inqubomgomo eqinile yokungabikho kwamalogi. Kunezici ezingaphezu kwezingu-20 ze-NordVPN, futhi kungenye yezindlela ezingcono kakhulu kuwe. Ngokubonakala okusebenziseka kalula, ungaqala nge-NordVPN ngokushelela.
I-VPN ekunika zonke izici ozifunayo, ungayithola le-VPN ngo- $ 3.71 nje ngenyanga iminyaka emibili. Intengo yangempela ye-VPN ingu- $ 11.95 ngenyanga, kepha isivumelwano seBlack Friday sikuvumela ukuthi ufune isaphulelo sika-70%.
Kuyinto uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokusakaza, ngakho-ke uma kwenzeka nsuku zonke, ufuna i-VPN ngezinjongo zokusakaza, uyazi ukuthi yilona lokusebenza olufanele wena. Ukuxhaswa kweNetflix neTorrent ngokushesha okukhulu ngale VPN esheshayo.
Ukusetshenziswa kwamadivayisi ayisithupha
Ukufinyelela kokusakazwa emhlabeni wonke
ICyberghost ingenye i-VPN enezilinganiso zezinkanyezi ezi-5 ngabasebenzisi abakhulu be-VPN. Inika ubumfihlo obukhulu futhi isekela ukuvinjelwa kwesikhangiso ukukuvumela ukuthi udlulise amehlo futhi usakaze kahle. Kanye neHotspot Shield, ingenye yama-VPN ambalwa anikezela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali.
ICyberGhost iyi-VPN ehamba phambili ekunikezela ngazo zonke izici ezingenhla ngokuningi ngentengo enkulu. Ingxenye enhle kunazo zonke, ngamadili weBlack Friday, ungonga okuningi okuningi. Akudingeki ukhathazeke ngokufinyelela kule divayisi. Itholakala kalula kuwo wonke amapulatifomu namadivayisi afana ne-iOS, i-MacOS, i-Android, iWindows, i-Firetv, i-chrome, i-firefox, nokunye okuningi.
Amanani abo aqala ku- $ 12.99 ngenyanga, kepha ngesivumelwano esimnyama sangoLwesihlanu, ungasithola ngo- $ 2/75 nje ngenyanga. Lokhu konga u-82%, hhayi kuphela kuzici ezikunikezayo, futhi kuyi-VPN enhle.
Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-45
Ayikho inqubomgomo yamalogi
I-PrivateVPN inikela kakhulu kubasebenzisi bayo, futhi uzokwethuka ukwazi ukuthi ngalolu Lwesihlanu Olumnyama, ungafaka izinyanga eziyi-12 mahhala ngokuthenga i-PrivateVPN izinyanga eziyi-12. Ngokutholakala kuzingxenyekazi ezinkulu, kusinikeza izivinini ezinhle kakhulu zokuphequlula nokusakaza.
I-PrivateVPN inikeza konke lokhu ngo-50% wentengo yayo yangempela, ukhokha unyaka bese uyisebenzisa kabili. Yisivumelwano esihlanya kodwa esiqondile kubasebenzisi. Amanani ngqo abalwa ku- $ 7.12 ngenyanga. Isivumelwano esimnyama sangoLwesihlanu se-PrivateVPN siqala ku- $ 1.89 ngenyanga iminyaka emibili. Lokho kungaba inani eliphelele lama- $ 45.36 ukusebenzisa i-VPN iminyaka emibili — isivumelwano esimnandi ngentengo yenqwaba ekunikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30.
Ukuvikelwa kokuvuza kwe-IPv6
6 Ukuxhuma kanyekanye
Inqubomgomo Ye-ZERO Data Logging
Amaseva Emazweni Angu-60
I-PureVPN iyithuluzi le-premium le-VPN elifinyelelwa abasebenzisi emhlabeni wonke, futhi banikela ngaphezu kwezindawo ezingama-2000 + zamaseva emazweni ahlukahlukene. Ivula cishe wonke amasayithi wokusakaza ukuze uwasebenzise futhi ikunikeze nejubane elihle. I-PureVPN muva nje, ku-2016, ivuselele inqubomgomo yayo yobumfihlo ukuze ingagcini izingodo futhi ivumele abasebenzisi bayo ukuthi babuke ukungezwani mahhala.
IPureVPN ikunikeza isivumelwano esihle esimnyama sangoLwesihlanu, futhi ungathenga uhlelo lweminyaka emithathu ngenkathi ukhokhela eyodwa kulokhu. Amanani abo wangempela aqala ku- $ 10.95, kepha isivumelwano seBlack Friday sibiza u- $ 3.33 nje ngenyanga. Isaphulelo esingu-70% nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-31 yisivumelwano ongafuna ukusithola.
I-P2P Inikwe amandla
Ukuxhaswa kwengxoxo bukhoma kwamahora angama-24
I-Ivacy VPN ukuhambisana okuphezulu kwe-VPN okunikeza zonke izici ku-VPN eyodwa. Ngokuvikelwa okuhle kakhulu kanye nesipiliyoni sokusakaza esingakholeki, futhi banakho konke okudingayo ku-VPN.Ukugxila kwabo okuyinhloko bekuhlala kunikeza ukuphepha kubasebenzisi; bafeze kahle kakhulu.
I-Ivacy VPN inikeza nezinye izici eziningi. Banesivivinyo sezinsuku ezingama-7 samahhala futhi ongasifaka isicelo kwiwebhusayithi yabo esemthethweni. Intengo ye-IvacyVPN iqala ku- $ 9.95 ngenyanga. Kodwa-ke, intengo ehlisiwe yi- $ 1.16 ngenyanga. Ukuza nge-tp $ 70 ngonyaka, wonga ama-88% ngalesi sivumelwano. Bakunikeza isabelo sokungena ngemvume esiyishumi esimnandi, futhi ungakusebenzisa ngokukhululeka ngasikhathi sinye kumadivayisi amaningi.
Ukukhethwa Kwenhloso ehlakaniphile
Enye i-VPN enhle, uzothola le VPN itholakala kalula kuzingxenyekazi ezinkulu. IProton VPN ithi inezici ezengeziwe zokuphepha ngaphezu kwanoma iyiphi i-VPN ejwayelekile, futhi le yiVPN enikeza ukukhetha okuthe xaxa ekuphepheni komsebenzisi okunikeza izici ezinhle. Noma kunjalo, banezici ezivelele futhi.
Ngaphandle kwezici ezishiwo ekuqaleni, banikela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30 kanye nabasebenzisi baso. I-ProtonVPN iyi-VPN enejubane elikhulu, futhi ungayihlola ngokuningiliziwe.
Amanani abo akhethekile, futhi uhlelo lwabo oluyisisekelo luqala ku- $ 3.29 ngenyanga. Kodwa-ke, uhlelo lweminyaka emibili lukuongela u- $ 241 njengoba kubiza u- $ 479 nje. Uthola zonke izici ezingenamkhawulo ngokufinyelela kumadivayisi afinyelela kwali-10 ngasikhathi sinye.
Kufika kumadivayisi ayi-10
Ukuvimbela Ukuvuza kwe-DNS
Ayikho Inqubomgomo Yezingodo
Isici Esibalulekile Sokubheka Ngenkathi uthenga Ama-VPN Kumadili Amnyama NgoLwesihlanu:
Ukuthenga i-VPN kungaba ukutshalwa kwezimali okuncane ezinkampanini ezinkulu nakubantu abazisebenzisa nsuku zonke, noma kunjalo, kuwebhusayithi yethu, siphakamisa ukuthi wazi ukuthi yini okufanele uyilindele ku-VPN ozothenga ngayo.
Kufanele uhlale uqinisekisa ukuthi i-VPN oyithengayo ilandela inqubomgomo ephelele yezingodo. Ama-VPN amaningi embonini azimaketha njengenqubomgomo ye-no-log VPN, kepha ezimbalwa zazo zigcina izingodo. Nge-VPN engagcini amarekhodi, ungapheqa ngaphandle kokukhathazeka ngokulandelwa.
Ama-VPN amaningi anokubethela kwe-AES 256, okumanje ukubethela okusungulwe kahle futhi okuphezulu okusetshenziswe ku-VPN. Bheka uhlobo lokubethela ngaphambi kokuthenga i-VPN.
Ijubane liyisidingo kunoma ngubani, futhi akekho othanda isiphequluli esisalela emuva noma esihamba kancane. I-VPN kufanele ibe nokuthi noma ngenkathi uphequlula futhi usakaza, akumele uzwe ukuncipha kwejubane. Ijubane kufanele libe njalo ukuze ungazizwa ukutholakala kwe-VPN. Kodwa-ke, ijubane lincike kakhulu kumaseva.
Ukuphepha kuyisici esibalulekile, futhi kufanele uqinisekise ukuthi i-VPN yakho ikunikeza ukuphepha okuphelele, ikunikeza ikheli le-IP elisha, futhi imaski ikheli lakho langempela le-IP.
Akekho othanda ukuhamba ngenqubo eningi nezinyathelo zokuqalisa nge-VPN, i-VPN kumele ibe lula, ibe noshintsho lokubulala, ivule, futhi iqhubeke nokusebenza ngaphandle kokukhathazeka, kufanele ifinyeleleke kalula ngabasebenzisi .
Noma iyiphi i-VPN kufanele igxile kakhulu ekunikezeni ukusekelwa okuhle kubasebenzisi bayo; ama-VPN amaningi ane-interface yokuxoxa bukhoma, kanti ezimbalwa zazo azinayo. Kufanele ukhethe i-VPN ekusekela ngamaphutha futhi iphendule ngokushesha emibuzweni.
Ngenkathi utshala imali enengqondo, umuntu angahlala efisa ukuba ne-VPN esekela amadivayisi amaningi. Uma kukhulunywa ngeVPN, ezinye zazo zibuyela emuva kumadivayisi we-5, kanti ezinye zisekela eziyisikhombisa ezinye ze-10. Ngokuya ngesidingo sakho, thatha isinqumo ngokucophelela ngokuthi mangaki amadivayisi wesikhathi esisodwa ongathanda ukusebenzisa i-VPN.
Amapulatifomu amakhulu asekela
Ngenkathi uthenga i-VPN usebenzisa amadivayisi amaningi, kufanele uqinisekise ukuthi i-VPN isekela amapulatifomu abalulekile. Amanye ama-VPNs kungenzeka angatholakali ku-iOS, kanti amanye angahle abe nohlobo lwe-PC. Hlala ukhumbula amapulatifomu ahlukahlukene onawo futhi ozowadinga i-VPN ngaphambi kokuthenga.
Abasebenzisi abaningi bathenga izinhlelo zaminyaka yonke bese befuna ukubuyiselwa imali esiqinisekisweni sokubuyiselwa imali. Lokhu kungaxhunyaniswa ngezinhloso zokuhlola kanye nokusebenzisa uhlelo lokusebenza inyanga mahhala. Kufanele uqinisekise ukuthi uthenga uhlelo lweVPN olukuvumela ukuthi ube nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali. Iningi lama-VPN linikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30; kodwa-ke, ama-VPN ambalwa ahlinzeka ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-45.
Izinketho zeseva zibalulekile. Ama-VPN amaningi anika izinkulungwane zamaseva ukufinyelela kubasebenzisi bawo, futhi kufanele uqiniseke ukuthi une-VPN enamaseva amaningi emazweni amaningi. Ngale ndlela, ungahlola futhi uthole ukuthi iyiphi iseva esheshayo nokuthi iyiphi iseva ekunika imiphumela emihle.
1Q. Ngingasithola isiqinisekiso sokubuyiselwa imali ekuthengweni kwesivumelwano esimnyama sangoLwesihlanu?
Iminyaka:Uma i-VPN oyithengile ikunikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali, ngokungangabazeki ungayifuna. Bheka iwebhusayithi ethile esemthethweni ye-VPNs ukuthola eminye imininingwane.
2Q. Yimaphi amanye amadili anikezwa ama-VPN ngaphandle koLwesihlanu omnyama?
Iminyaka:Amadili ayaphuma kumawebhusayithi asemthethweni we-VPNs, noma kunjalo, ngaphandle kwe-Black Friday, futhi amadili abalulekile aphuma ngoMsombuluko we-Cyber ​​nangesikhathi seNew Year '.
Iziphesheli ze-Black Friday VPN ziyesabeka ngokumangazayo. Kumele ngabe usazibuza ngazo zonke lezi zinketho, i-VPN ongayikhetha. Zonke zinhle impela. Kodwa-ke, thina uqobo singancoma i-ExpressVPN ngenxa yezici zayo ezinhle nejubane.
Sithemba ukuthi singakunika amadili amahle kakhulu akujabulisile futhi akusindise nemali. Ukwazi kabanzi ngamadili we-VPN black Friday, phawula kubhokisi lethu lengxoxo ngezansi. Singathanda ukuzwa impendulo futhi sicabangele iziphakamiso zakho ezibalulekile ebhokisini lengxoxo.
Ama-FMovies - Singawabuka Ama-Movie Ngalokhu?
Usuku lokukhishwa lwango-
Isizini 4 Yezinkinga Ezinhle: Idethi Yokukhishwa, Ukusakaza, Isakhiwo, Nezibuyekezo!